Lolu hlelo lokulekelela lwaba umbono wentsha ngo-2009 lapho bebuka ukuthi iningi lentsha liphumelela kahle ibanga leshumi bese lihlala ekhaya ngenxa yokuntula imali yokuqhubeka nezifundo.
Umbono wawuthi ngoba lukhona uhlelo luka NSFAS uma sewungaphakathi esikoleni kuhle thina njengomasipala sibawezele ngaphesheya.
Imali yaqala incane kunale eyiyo manje. Eminyakeni emibili edlule yayi-R450 000.
Kwabonakala ukuthi ziningi izicelo ezigcina zingahlangabezekanga. Sabe sesiyikhuphula iba uR650 000.
Impela lemali ibukeka iningi kodwa kunabantu namanje abangazange bathole usizo ngenxa yobuningi bezicelo.
Sisazoqhubeka nokusebenzisana ngokwethembeka.-
UMeya wase Mzumbe uMnuz Sizwe Ngcobo.